Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-boasary vita amin'ny plastika - Orinasa fantsom-bokatra vita amin'ny plastika China - Fizarana 2
Fantsona polyethylene ho an'ny fiarovana ny tariby
Ny akora fantsona dia Polyethylene. Mora ny mametraka sy manaisotra azy, mamonjy fotoana be dia be. Azo ampiharina amin'ny fananganana milina, fitaovana elektrika, lalimoara fanaraha-maso herinaratra. Ny mari-pahaizana momba ny fiarovana dia mety hahatratra IP68, afaka miaro ny tariby safty. Ny toetoetran'ny fantsona polyethylene dia mahatohitra solika, malefaka, ambany henjana, faritra manjelanjelatra, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium nandalo RoHS.
Tube Tube Polyamide PA12 mitafo
Nylon 12 dia fantatra amin'ny anarana hoe Polylaurolactam, PA12. Ny fananan'ny fantsom-pandrefesana polyamide 12 dia malefaka mora sy tena tsara, faritra manjelanjelatra, mahazaka rivotra, tanjaka mekanika avo lenta, mahazaka solika, asidra ary solvents. fanoherana ny fifandirana, famonoana tena mahatohitra UV, fametrahana ivelany, hatevin'ny rindrina antonony tsy misy halogen, phosfor ary cadmium, nandalo RoHS. Nahazo mari-pahaizana momba ny lalamby avy any Japon, France ary Alemana.
Fantsona mitafo poakaty Polyamide
Ny fantsom-boasary nylon (polyamide), antsoina hoe fantsom-panafody PA. Izy io dia karazana fibre synthetic, miaraka amin'ny toetra ara-batana sy simika ary mekanika tsara: fanoherana ny abrasion, azo ampiasaina amin'ny fasika, famafazana vy; malamalama ambonin`ny, mampihena ny fanoherana, afaka misoroka ny harafesina sy ny fametrahana azy; malefaka, mora miolaka, mora apetraka ary mora karakara.
Fianarana PA12 Polyamide Tubing
Fampahalalana momba ny profil Polyamide Tubing
Fantsona mahatohitra hafanana avo lenta
Polyamide mahatohitra hafanana ambony ny fitaovana. Volondavenona (RAL 7037), mainty (RAL9005). Ny flame-retardant dia HB (UL94), hoy ny FMVSS 302: <100mm / min. malefaka miovaova sy tena tsara, hatevin'ny rindrina antonony, tampon-glossy, mahazaka rivotra, mekanika avo lenta, mahazaka solika, asidra ary solvents, fanoherana ny fikorontanana, fantsona mainty dia mahatohitra UV, tsy misy Halogen, phosfor ary cadmium, nandalo RoHS .. Temperature ny halavany dia min-40 ℃, max150 ℃, fotoana fohy170 short.
<< <Teo aloha 123 Manaraka> >> Pejy 2/3